China Ophthalmic AB ultrasonic yekuongorora chiridzwa SDK180ABT Kugadzira uye Fekitori | SDK
Akangwara kuziva kweanterior kamuri, lens uye retina
Otomatiki kuyedza kwakakura kukanganisa kwakarongeka
A inodarika iko kuyerwa kweiyo 0.02mm
Kungwara kurudziro yeIOL kuverenga kuverenga
IOL fomula pamberi uye mushure mekuvhiya kwekurapa mumapoka mazhinji
Real nguva chinjika vasabatwa udzamu
Yechokwadi nguva yekufananidza ye frequency kutendeuka emission
Movie yekutamba furemu nesarudzo furemu
Zvironda zvakanaka zvinoonekwa zvakajeka
Otomatiki kuchengetwa kwekuongorora mhedzisiro
Yakasarudzika kesi template - imwe kiyi yekufona
Inovakwa muPC diki uye inotakurika
Yakagadziriswa zvese Chinese mashandiro ekushandura
✦ Kururama kweMipimo
Patent tekinoroji inozivisa zvine hungwaru imba yekumberi, kristaro uye retina, ichidzivirira kukanganisa kwekuverenga nekuda kwenzwi rakasiyana velocity yenyama. Iyo otomatiki re yekuyera basa rekukanganisa rakanyanya kukura kudzivisa kuyerwa kukanganisa kunokonzerwa nekuregeredza kwevanhu. Mukubatana neiyo-supermeasurement kunyatso kwe0.02mm, iyo ultrasonic kuyera mhedzisiro ye sdk / 180 / abt yekuongorora chiridzwa chinhu chakarurama. Mukushandisa kwekiriniki, kukanganisa kwemuchina kwaive kushoma pane 0.05mm zvichienzaniswa neIOLMaster muzvipatara zvakawanda.
✦ Yakarurama Kukarukureta
Zvinoenderana nemakore mazhinji ekuongororwa kwekiriniki uye nhamba huru yemishumo yezvinyorwa, kuchine mumwe musiyano pakati peopreoperative inotarisirwa diopter uye neanoporaoperative diopter chaiyo, zvichikonzera huwandu hwakawanda hweapostoperative ametropia. Inoongororwa kuti zvikonzero zviri muzvinhu zvakawanda senge preoperative biometrics, kusarudzwa kweiyo intraocular lens kuverenga manhamba uye kusarudzwa kwemaitiro ekushanda. Iyo yakangwara kurudziro basa reIOL kuverenga kuverenga kwakavakirwa pane yakawanda nhamba yekiriniki yekuverenga mhedzisiro yenyanzvi, uye iyo yekuongorora chiridzwa inozvikurudzira inokodzera IOL kuverenga kuverenga fomula maererano neye preoperative biometric mhedzisiro yevarwere, Kudzivirira postoperative ametropia inokonzerwa nekusarudzwa kwe isina kukodzera intraocular lens kuverenga formula. Panguva imwecheteyo, zvakare ine akawanda mapoka eIOL kuverenga maitiro pamberi uye mushure mekurapa kwekurapa kwevanachiremba kusarudza uye kuenzanisa.
Is Zviri pachena
Pasi pechimiro chekutarisa cheB-mhando ultrasonic probe, iyo yekudzika kudzika inogadziriswa kubva 20mm kusvika 65mm munguva chaiyo. Kana iyo DP ingangoita makumi matatu, mufananidzo unokudzwa kanopfuura ka4. Yakasanganiswa neyakawedzera-kukwirira kuwana 105dB, iwo madiki eiyo vitreous opacity, mashoma vitreous hemorrhage uye retinal detachment inogona kuratidzwa zvakajeka.
Mune iyo yekutarisa mamiriro eB-mhando ultrasonic probe, iyo frequency frequency inogadziriswa munguva chaiyo kubva ku8MHz kusvika 11mhz. Kana 11mhz ichiparadzirwa, mufananidzo wacho unonyanya kusimba, uye kana 8MHz ichipfuudzwa, chiratidzo cheececho chinopfuma. Iwo maviri-chikamu kuenzanisa anogona zvirinani kucherechedza iwo maronda.
Dzvanya kiyi yechando mumatanho ekuyera, uye chiridzwa chinogona kungo chengeta mhedzisiro yekuongorora pasina mamwe makiyi, ayo ari nyore uye anokurumidza; Movie playback basa, - kiyi yekutamba cheki maitiro, sarudza mifananidzo furemu neforamu. Iyo kesi template inogona kuve yakasarudzika uye inogona kudaidzwa nekudzvanya kamwe chete kuchengetedza iyo nguva yekunyora makesi; Yakavakwa mumaindasitiri ekudzora PC, zviri nyore kushanda uye kutakura; Iyo izere Chinese oparesheni interface iri nyore kuti vanachiremba vadzidze uye vashandise muchina.
Pashure: Isiri-mydriatic + Contrast Yakabatanidzwa Dhijitari Fundus Imaging System TNF507
Zvadaro: Corneal topographic mufananidzo dijitari system chishandiso CT-6
Ultrasonic Midziyo YeOphthalmology Yemhuka Kuedza
Yakakwira-kumagumo DC yakanangana ophthalmoscope KJ8C